Faah faahin:- Dagaal aad u culus oo ka dhacay magaalada Jowhar iyo qasaaraha ka dhashay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal aad u culus oo ka dhacay magaalada Jowhar iyo qasaaraha ka dhashay (AKHRISO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal habeenkii xalay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkaasi ayaa sida la sheegay yimid kadib markii kooxo hubeysan ay rasaas is-weydaarsadeen ciidamo boolis ah.
Ciidamo kale oo markii dambe gaaray goobta uu dagaalka ka bilawday ayaa sidoo kale dhinacooda dagaal toos ah la galay ciidamo la sheegay inay madani yihiin iyo ilaalada guddoomiyaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe C/qaadir Cabdule Maxamed (Buur Fuule).
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku dhintay laba askari oo ka tirsanaa kuwa ciidamada madaniga ahaa, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay seddax qof kale oo dhamaan ahaa dad rayid ah oo ay midi haweeney tahay halka midka kalena uu yahay canug yar.
Dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa markii dambe la gaarsiiyay isbitaalka magaalada Jowhar, halkaasi oo haatan lagu daaweynayo.
Dhinaca kale, ciidamo uu watay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sh/dhexe Axmed Meyre Makaraan oo goobtaasi markii dambe gaaray ayaa xaalada qaboojiyay.
Ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka magaalada Jowhar iyo ciidamada nabad-sugidda ee halkaasi, waxaana xaaladda goobtii lagu dagaalamay ee magaalada Jowhar ay saakay tahay mid degan.
Ugu dambeyntii, ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya oo dhawaan la geeyay magaalada Jowhar iyo ciidamadii hore halkaasi u joogay ayaa maanta howlgalo culus ka wada magaaladaasi, waxaana howlgaladaasi ay yihiin kuwa lagu sugayo amniga xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaas.